Ahoana ny famongorana ny LG G2 tsikelikely | Androidsis
Alohan'ny hanohizanao hamaky ity lahatsoratra ity dia tokony ho fantatrao fa ny rafitray dia manana rafitra napetrak'i LG Fantatr'izy ireo fa nanao pirinty ny terminal izahay ary niditra ny rafi-drakitra dia mametraka Rooting mitovy. Io, na dia milaza aza ny lalàna hafa, dia mety hiteraka olana eo ny antoka ofisialy toy ny LG Manoloana ny anomaly rehetra dia mety hitaky izy io fa vokatry ny famelana na ny fakanana ilay fitaovana.
Ka alohan'ny hitohizan'ny fampianarana amin'ny Root LG G2Ataovy ao an-tsaina izay nolazaiko taminao satria ity dingana ity dia tsy hanadino ny antoka ofisialy natolotry ny LG.
Izany rehetra holazaiko anao eto izany dia azo atao noho ireo mpandraharaha tsy miankina toa an'ireo XDA Developers izay eo am-pikarohana tsy tapaka mba hahazoana antoka fa manana ny terminal misy antsika amin'ny 100 x 100 ary afaka miditra amin'ny fahafaha-manao feno an'ireny terminal ireny Android afaka manolotra antsika tsy misy fetra izy ireo.
1 Fepetra ilaina
2 Ahoana ny fomba hanongorana LG G2
Ny fepetra ilaina voalohany dia ny fananana ny iray amin'ireo terminal LG G2 mifanaraka izay nolazaiko tamin'ny lohatenin'ny lahatsoratra, raha tsy manana ny iray amin'ireo maodely ireo ianao LG G2 fadio ny fanarahana ny tutorial satria tsy mety aminao io ary mety hanana olana ianao.
Ny zavatra faharoa dia ny fananana ny Mpamily LG ao amin'ny rafitra fiasanao miaraka amin'ny Windows, hataonao apetraka izy ireo raha mifandray amin'ny alàlan'ny USB ny terminal anao ary efa nampitahanao azy ve.
Tena ilaina koa ny fananana ny android sdk, azonao io misintona izay ilainao amin'ity rohy ity.
Ahoana ny fomba hanongorana LG G2
Para Root LG G2 ilaintsika ampidino amin'ny endrika ZIP ity rakitra voafintina ity ary esory izany na aiza na aiza ao amin'ny anay PC amin'ny Windows, raha vantany vao vita izany dia hanohy ny fizotran'ny Rooting vaovao izahay LG G2:
Mampifandray ny tariby USB amin'ny solosaina isika nefa tsy mampifandray ny LG G2.
Avy amin'ny LG G2, miditra amin'ny sehatra ankapobeny izahay ary mamela ny Famafana USB hita ao anatin'ny safidy safidy mialoha. Raha tsy hitanao ireo safidy ireo dia tsy maintsy miditra ianao Fikirana / Momba ny mombamomba ny telefaona / Rindrambaiko ary tsindrio ny safidy manangana isa miverimberina ahafahan'ny fidiran'ny mpamorona, avy eo miverina amin'ny tabilao ankapobeny ary hiseho ny safidy safidy mandroso.
Mampifandray ny finday izahay izao PC amin'ny alàlan'ny tariby USB ary miandry izahay sao apetrakao fotsiny ireo mpamily ilaina.
Ankehitriny, rehefa vita ny fametrahana ny mpamily dia sokafantsika ny fampirimana tsy misy zip ary alefa ny rakitra antsoina hoe root.bat
Ankehitriny ny varavarankelin'ny terminal famaranana Avy amin'izany, amin'ny alàlan'ny fanoratana fanalahidy rehetra, hanombohana ny fizotran'ny fiorenan'ny terminal.
Ny programa dia hangataka antsika hanapaka ny LG G2 amin'ny USB ary hanafoana ary hamelana ny debugging USB.
Mifandray indray izahay amin'ny alàlan'ny USB the LG G2 ary manoratra eny izahay hanohizana ny tsy maintsy hongotantsika fametrahana terminal sy fampiharana superuser.
Miandry ny famaranana ny fizotrany izahay nefa tsy mikasika na inona na inona.
Rehefa vita izany dia ho afaka hanamarina ny fomba ananantsika ny fampiharana ny superuser ary ireo fahazoan-dàlana vokatr'izany hampiasa fampiharana izay mitaky Tombony manokana.
Fanazavana fanampiny - Jailbreak sy Root amin'ny terminal finday. Tsara sa ratsy?
Ampidino - Android SDK, Ilaina ny famafazana mba hamongorana LG G2
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » LG » Ahoana ny fomba hanodinana ny maodely LG G2 D-800, D-802, D-803, V-380 ary F-320K
Rogelio Calderon dia hoy izy:
Salama, miasa amin'ny D805 ve izy io?
Valiny tamin'i Rogelio Calderón
kiros dia hoy izy:
Salama, rehefa mamaka ramanavy amin'ilay fitaovana amin'ny fomba debugging aho dia tsy misy safidy miseho rehefa manindry lakile ho azy cmd
Mamaly an'i kiros
alfredocruz dia hoy izy:
Nanaraka ny dingana rehetra aho, ary nandeha tsara ny zava-drehetra, tsy nanome ahy hadisoana izany, fa noho ny antony tsy mbola miorim-paka ny telefaona.
Mamaly an'i alfredocruz
Ampidiro ny Play Store ary sintomy ny fampiharana SuperSU.
Tamin'ny 23/12/2013 22:28 PM, «Disqus» nanoratra:
Miala tsiny fa efa hitako tsara, tsy nety tsara ny zava-drehetra araka ny nieritreretako azy, soa ihany fa nanao pikantsary aho.
amin'ny rafitra fametrahana RW ary manosika ny SU: milaza fa tsy avela ny fandidiana.
tsy nahavita nandika SU tamin'ny system / xbin / su
tsy afaka aseho ny rafitra / xbin / su
tsy afaka chmod rafitra / xbin / su
mount: tsy mahazo miasa
Amboary io! ampidino ny ioroot15 amin'ny ioroot10 tsy mandeha amin'ny kinova farany.
DEW dia hoy izy:
miasa amin'ny D805?
Valiny amin'i ROCIO
Edgar diaz dia hoy izy:
Azafady mba lazao amiko raha ilaina ireo dingana ireo mba hahafahan'ny telefaona mandray mpandraharaha hafa, satria voasakana izy Misaotra
Valiny tamin'i Edgar Diaz
Azonao atao ve ny mamongotra indray mandeha vita?
Amin'ny alàlan'ny famerenana orinasa tsotra dia tokony hesorina.
Ahoana no anaovana ny famerenana amin'ny laoniny? Misy programa toa an'i iTunes miasa amin'ny android ve? Vaovao tanteraka aho, avy amin'ny iphone.
Tutorial video ho root G2 D802 kitkat
Don dia hoy izy:
Misaotra betsaka, Francisco, fisalasalana, mahatonga ny finday mora tohina kokoa ny faka? Fiarovana no tiako holazaina
Mamaly an'i Don
fanontaniana azo apetraka amin'ny kitkat?
Luis Angel dia hoy izy:
Salama, manana Lg G2 D800 aho, tamin'ny fotoana nahafahako namaka, fa rehefa nandeha nametraka ny fanarenana aho dia nanome ahy an'ity hadisoana ity
Manamarina ny fanamarinana boot
Hadisoana Boot azo antoka
Antony fanamarinana Boot fanamarinana
Ny tena marina dia, tsy hitako izay hatao, manahy aho, nongotako izany ary naveriko tamin'ny laoniny, saingy apetrany eo amin'ny efijery izany ary maty.
Mamaly an'i luis angel
genuxuy dia hoy izy:
Tsy misy intsony ireo rakitra MEGA. Izy io dia miasa amin'ny D805? fiarahabana
Mamaly an'i genuxuy